Xawaalado ku yaala Jowhar oo la xeray maanta + Sababta - Caasimada Online
Home Warar Xawaalado ku yaala Jowhar oo la xeray maanta + Sababta
Xawaalado ku yaala Jowhar oo la xeray maanta + Sababta
Xawaalo gaaraya seddex xawaaladood oo ku yaala magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeelaha dhexe ayaa la sheegayaa inay maanta u xereen kasoo bixid la’aanta amaro maamulka uu kusoo rogay sida dadka deegaanka ay sheegayaan.
Wararka ayaa sheegay in shirkadaha xawaaladeed ee xeran maanta lagu amray inay bixiyaan lacag gaaraysa ku dhawaad 1000$ ,taasi oo uu maamulka sheegay in wax looga qabanayo xaalada nadaafada deegaanka.
Daa’uud Xaaji Ciiro,afhayeenka maamulka gobolka Shabeelaha Dhexe oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in shirkadaha la xeray ay ka soo horjeesteen amarka kasoo yeeray maamulka gobolka oo ah bixinta lacagta lagu amray.
Jubba Express iyo Olompic Express ayaa ka mid ah xawaaladaha maanta aan shaqeynin sababta la xiriirta bixin dhaqaalaha maamulka uu ku amray.
Waa markii ugu horeysay oo waxii ka dambeeyay bishii December 9 keedii markii ciidamada dowlada ay la wareegeen gacan ku heynta magaalada xarig loo geysto xawaaladaha ka shaqeeya Jowhar.